2015, Taonan’ny Fandrosoana Ho An’ny Fahasamihafàna Ara-pananahana · Global Voices teny Malagasy
2015, Taonan'ny Fandrosoana Ho An'ny Fahasamihafàna Ara-pananahana
Nandika (fr) i Charleen Henry
Voadika ny 09 Febroary 2016 3:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Català, Español, မြန်မာ, Deutsch, русский, Italiano, English
Fitanjozoran'ireo LGBT nanoloana ny La Moneda, tao Santiago, Shily, tamin'ny 2009. Tamin'ny 2015, i Shily no firenena voalohany tany Amerika Atsimo nanaiky ny fifanambadian'ireo olona mitovy taovam-pananahana. Sary nopihan'i CiudadanoGay (Picasa) [CC BY 3.0), tao amin'ny Wikimedia Commons
Taona 2015: voamarik'ireo fivoarana avy amin'ny lafivalon'ny tany, teo amin'ny sehatry ny zo ho an'ireo LGBTI sy ny fahasamihafàna ara-pananahana, indrindra fa ny zo momba ny fanambadiana.
Talohan'ny lohataona no nisy dingana voalohany vita tao Irlandy, firenena iray izay katolika no betsaka amin'ny vahoakany ary heloka ny fifanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana, hatramin'ny 1993. Ny 22 may, nantsoina hifidy ny olom-pirenena mba hamaritana raha, eo anatrehan'ny lalàna, azo ekena ny fifanambadian'ny olona roa tsy anavahana izay taovam-pananahany. Nanaiky tamin'ny isanjato 62% ireo mpifidy. Irlandy araka izany no firenena voalohany teto ambonin'ny tany nanitatra ny fanambadiana ho azon'ireo pelaka atao, taorian'ny fifidianana nataon'ny daholobe.
Volana iray taty aoriana, ny 26 jona, napoapoaky ny tenifototra #LoveWins [Mandresy ny Fitiavana] ny tambajotra sôsialy, ho setrin'ny didim-pitsarana iray navoakan'ny Fitsaràna Tampony tao Etazonia tamin'ny raharaha Obergefell v. Hodges. Io didim-pitsarana io no nahalasa ho ara-dalàna ny fifanambadian'ny olona roa mitovy taovam-pananahana, araka ny fanintsiana faha-14 natao tamin'ny Lalam-panorenan'i Etazonia. Naneho ny heviny momba ity adihevitra manan-tantara ity ilay mpitsara, Anthony M. Kennedy :
Tsy misy firaisana lalim-pàka mihoatra noho ny fanambadiana, satria izy no porofo hita mason'ny fenitra ambony indrindra : ny fitiavana, ny tsy fivadihana, ny fanolorantena, ny fanaovana sorona sy ny ankohonana. Amin'ny alàlan'ny fanambadiana, lasa olondehibe kokoa tsy araka izay naha-izy azy ny olona roa. Toy izay anehoan'ireo sasany mangataka amin'ireny raharaha ireny, ny fanambadiana no mampiseho fitiavana iray izay manavatsava hatramin'ny fahafatesana aza. (…) Manantena ny tsy hohelohina hiaina anaty fitokana-monina izy ireny, tsy ho ahilika tsy ho ao anatin'ny iray amin'ireo rafitra tranainy indrindran'ny sivilizasiona. Mangataka ny haja amam-boninahitra mitovy eo anatrehan'ny lalàna ry zareo. Omen'ny Lalàm-panorenana azy io zo io.
Herinandro vitsivitsy taty aoriana, ny 21 Jona, nanapaka hevitra ny Fitsaràna Eoropeana momba ny zon'olombelona fa ny fandàvan'i Italia tsy hanaiky ary tsy hiaro ny fanambadian'ireo olona mitovy taovam-pananahana dia maka zotra mifanohitra amin'ny Toko faha-9 amin'ny Fifanarahan'ny Eoropeana momba ny zon'olombelona. Araka io fifanarahana io, ny olona tsirairay dia manana zo hohajaina ny fiainany manokana sy ny fiainam-pianakaviany. Io fandresena io angamba no tena manandanja indrindra teo amin'ny sehatry ny zon'ireo LGBTI hatramin'ny raharaha Toonen v. Australia, izay niafara tamin'ny fanafoanana ilay lalàna Aostraliana farany nandràra ny firaisana ampiasàna lavabody (sodomia). Ity tranga ity dia nanaraka ilay fanapahankevitry ny Kaomitin'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'OIombelona, izay nanome fiarovana ho an'ireo olon-dehibe mifanaiky amin'ny resaka firaisana ara-nofo, araka ny fotokevitry ny atao hoe ‘fiainana manokana’, velabelarin'ny toko faha-17 amin'ny Fifanarahana Iraisampirenena mifandraika amin'ny zo sivily sy politika.
Natsahatry ny Fitsaràna Tampony ao Etazonia ny fanavakavahana amin'ny resaka fanambadiana. Sary : Ted Eytan (CC BY-SA 2.0).
Ny 22 Oktobra i Shily dia nankalaza koa ny fanambadiana sivily teo amin'olona roa mitovy taovam-pananahana, nanjary ho ny firenena fahafito ao Amerika Latina manaiky ho araka ny lalàna ireny fifamatorana ireny. Efa fotoana ela izay no nahalahelovana ireo taona mampalahelon'ny fitondràn'ny filoha Ibañez del Campo, fantatra tamin'ny fankahalàny fatratra ny olona mitovy taova nefa mifanambady. Tamin'izany fotoana izany, nisy ny fanaovana bemidina sy ny fisamborana faobe ireo olona mitovy nefa mifanambady, izay niafara tamin'ny fandefasana azy ireny ho any aminà toby famondronana ireo “tsy mifanaraka amin'ny fenitra sosialy”, tao Pisagua, tany avaratry ny firenena.
Eken'ny fitsaràna tampony ao Kolombia ho araka ny lalàna ny fananganana zaza ataon'ireo mpivady pelaka.
Tamin'ity taona ity , nitatra nankany amin'ny fahafahan'ireo pelaka manangana zaza ihany koa ny fitovian-jo. Tao anaty didy iray manantantara navoakan'ny fitsaràna, nangataka ireo masoivoho kolombiana misahana ny fananganana zaza ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana ao Kolombia mba tsy haneho fanavakavahana manoloana ireo pelaka mifanambady. Taorian'ny adihevitra naharitra ora sivy dia nanapaka ny Fitsaràna fa azon'ireo pelaka mpivady atao ny manangana zaza. “Tsy misy ifandraisany amin'ny tsy fahafahana ara-pitondrantena, ara-batana na ara-tsaina hangananana zaza ny fironana ara-pananahana na ny resaka taovam-pananahana”, hoy ny nambaran'ny filohan'ny Fitsarana Tampony, Maria Victoria Calle Correa. Taona dimy taorian'ny nanekena ho araka ny lalàna ny fanambadiana ho an'ireo pelaka, dia neken'i Portiogaly ihany koa ny fanambadiana pelaka. Ny 23 septambra 2015, natolotr'ireo antoko avy amin'ny maro an'isa sosialista ho eo anivon'ny Parlemanta ireo tolodalàna manome antoka ho an'ireo pelaka mba hanana zo hananganana zaza na fitorontoroana zaza anaty fitaratra (in-vitro). Nankatoavina tamin'ny 20 Novambra ireny tolodalàna ireny ary eo am-piandrasana ny fankatoavan'ny filoha.
Ho an'ny maro dia taonan'ny fandrosoana ny 2015, saingy tsy dia mahakasika loatra ny “T” sy ny “I” ao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny LGBTI ireny firosoana vita ireny. Mbola miatrika sàkana goavana hatrany ny vondrom-piarahamonin'ireo Trans sy intersexuées, ary aminà tranga maro, dia tsy nitondra ny tena fanatsaràna ny fiainan-dry zareo ny zo momba ny fanambadiana. Hatramin'ny anio, tsy mivoatra ao anatinà fototra mitovy amin'ny an'ireo ambiny hafa na iray aza ireo vondrona ireo. Ahilikilika be ry zareo any amin'ny asa sy ny fahazoana fiahiana ara-pahasalamàna, ankoatry ny fizakàna sotasota sy herisetra tafahoatra.
Fanilikilihana mifototra amin'ny #SOGI (fironana ara-pananahana, ny mahalahy na vavy ary intersex – tsy lahy tsy vavy): tsy fahatakàrana ny zon'ireo olona ‘intersex’ ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana.
Ho an'ireo tsy lahy tsy vavy, indrisy fa mahazatra ny mahita ireny ankizy ireny anaovana dingàna ara-pitsaboana sy fandidiana tsy misy ilàna azy mba hanitsiana ny fijery azy ivelany hifanaraka amin'ny hevitra raikitampisaka hoe tsy misy afa-tsy karazany roa ny olona. Ireny dingana ara-pitsaboana ireny, izay mazàna no tsy afaka iverenana, dia mety hiteraka tsy fahafahana miteraka mandrakizay, fanaintainana, tsy fahatazonana amàny, tsy fahazoana fafiny rehefa manao firaisana, ary hatramin'ny ratra ara-tsaina mandra-pahafaty mihitsy. Matetika atao tsy misy fieràna, tsy misy fahalalahana na fampahafantàrana ilay olona voakasika akory izy ireny.
Nisy tetikasa iray fikarohana natomboky ny ONG iraisampirenena Transgender Europe tamin'ny Aprily 2009, niarahany tamin'ny Liminalis, ilay gazety ety anaty aterineto mampiasa tenimpirenena maro, hanisàna, hanarahana maso ary hanadihadiana momba ireo famonoana olona ‘Trans’ manerana izao tontolo izao. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2008, isaky ny telo andro eo no misy fitaterana famonoana olona iray ‘Trans’. Araka ny lazain'ny tetikasa Trans Murder Monitoring [Fanarahana maso ny famonoana ireo olona Trans] an'ny Transgender Europe, famonoana niisa 271 no nisy nitatitra teo anelanelan'ny Oktobra 2014 sy Septambra 2015, izany hoe olona 36 isaky ny ora iray.
Andro manandanja ny anio. Andro fahatsiarovana ireo olona ‘Trans’. Ary dia hahatsiaro isika.
Ny 20 novambra no natao ny fankalazàna ny andro faha-16 ho an'ireo olona ‘Trans’. Tamin'ny 1999 no nankalazaina ny voalohany, taorian'ny nahafatesan'i Rita Hester, vehivavy iray ‘Trans’ tsy fotsy hoditra, tamin'ny 1998 tao Massachusetts. Hatreo, isantaona, mitombo hatrany ny isan'ireo olona ‘Trans’ sy mpikatroka izay manokana fotoana hahatsiarovana ireo aina nafoy nanerana izao tontolo izao noho ny herisetra fankahalàna ireo ‘Trans’. Ireny antontanisa mampivarahontsana ireny no nanosika ny sasantsasany tamin'ireo mpikatroka mafàna fo sy mpiaradia aminy hanolotra sosokevitra hamadihana ilay andro fisaonana ho andro fanoherana / fijoroana ho an'ireo ‘Trans’. Maneho hevitra ao amin'ny Bustle ilay ‘Trans’ mpanao gazety, Claire-Renee Kohner :
Ireo vehivavy ‘Trans’ no tena hita be indrindra amin'ireo karazanà Trans ary mora ny manadino hoe misy anie ny lehilahy Trans, sady miaina haavo ambony be raha resaka fikosehana rehefa ampitahaina aminay vehivavy. Nitondra fahasamihafana tamin'ilay volavolan-dalàna natao vao haingana momba ny trano fidiovana iraisan'ny rehetra i Michael Hughes, tamin'ny fangalàny sarintena tao anatin'ny trano fidiovana iray natao ho an'ny vehivavy. Nametrahan'ny Bustle fanontaniana izy : “Faly aho fa misy andro iray ahafahan'ireo vaovao ao anatin'ilay sehatra, any anatin'ireny fifanakalozankevitra ireny, mirotsaka miara-misalahy. Saingy toa anareo ihany, heveriko fa isanandro dia andro iray natao hahitàna antsika rehetra. andro 7/7, ora 24/24, andro 365 ao anatin'ny taona iray ho an'ny vondrom-piarahamonina ‘trans’.”
Mahafinaritra. Mifamory mba hanao fihetsiketsehana ireo mpikatroka mafàna fo ‘tsy lahy tsy vavy’ sy ireo hijras (vehivavy trans) hanohitra ny fanilikilihana ao India.